Owakuleli wabukisa ngengqwele yase-UK - Ilanga News
Home Ezemidlalo Owakuleli wabukisa ngengqwele yase-UK
Owakuleli wabukisa ngengqwele yase-UK
Wayingqimuza ilwela phambi kwabalandeli bayo eBritain
UMSHAYISIBHAKELA wakuleli uJake Tuli ongomunye owazakhela igama kulo mdlalo ngezikhathi zombuso wamaNgisi kuleli. UJake Tuli empeleni unguJacob Ntuli owaba yingqwele yeBritish Empire esigabeni se-flyweight ngo-1952.
UMLANDO wesibhakela eNingizimu Afrika usuke ungaphelele nxa lingavelanga igama likaJacob Ntuli owazakhela igama kulo mdlalo eminyakeni edlule.
Ngenxa yokuba ephile ngesikhathi leli zwe liseyikoloni ngaphansi kombuso wamaNgisi, igama ebelisetshenziswa ngabacosheli bezindaba bekuthiwa nguJake Tuli ukuze kuvumelane nolimi lwesiNgisi.
UBONGINKOSI ZONDI usihlanganisele lo mbiko ngale ngqwele yomdlalo wamankomane.
UJACOB Ntuli wazalwa ngomhla ka-7 kuNtulikazi (July) ngo-1929 uyise kungumZulu “oyikhaladi” emzala kunina owayengumTswana.
Uzalwe ngesikhathi sokugudluzwa kwemikhukhu okwaqalwa ngo-1930 okwenza umndeni wakubo wathuthela e-Orlando East ngo-1934 usuka kuFox Street, eGoli.
Kwabo babewu-12. Kuse-Orlando East lapho aqala khona ukufunda eSt Mary’s Primary School. UJacob waphothula imfundo yamabanga aphansi esikoleni eSt Peter’s yodumo eRosettenville.
Ukungcwekisana ngomdlalo wesibhakela wakuqala eSt Mary’s Boys Club, wadlulela e-Orlando Proper Boxing Club.
Kungesikhathi esefunda e-Orlando High lapho ahlangana nentombi, uPeggy Lamont okwaphetha ngokuba bashade.
Babusiswa ngabantwana abane, uVeronica, uJohn, uJames no-Alan.
Wazakhela udumo enqoba i-British Empire
Ukulwa esigabeni sabangakhokhelwa (amateur) wakuqala ngo-1946. Kuzokhunjulwa ukuthi kwi-LANGA langeSontoelaphuma ngomhla ka-22 kuNdasa (March) nyakenye, livelile igama likaJacob nelika-Ezekiel “King Kong” Dlamini owaduma ngomculo-mdlalo (musical) iLion King, owa-shisa izikhotha, waze wawelela phesheya, bona abaqoqwa nguFakazi Benjamin Duncan Jele, phambilini obecula isicathamiya, babumba isitebele esasizilolongela eBlue Mountain, ehostela laseJibhi, eGoli.
Ngo-1952 waba yingqwele yaseTransvaal neyeSouth Africa esigabeni se-flyweight. Nakho-ke sekuvela ithuba lokuba aye phesheya, okwenza walifulathela elakuleli ngaye u-1952 elibangise e-United Kingdom.
Ngawo lowo nyaka wazakhela udumo emhlabeni ngokunqoba isicoco seBritish Empire esigabeni se-flyweight.
Kuthe ngo-1954 umndeni wa-khe walifulathela leli ukuyohlala naye phesheya.
Amabhokisa akudala ayematasa eringini
Okuphawulekayo ngabashayisi-bhakela bakuqala wukuthi babematasa kakhulu, okungafani nabalesi sizukulwane lapho sekuvamile ukuba ibhokisa lilwe impi eyodwa kuze kuphele unyaka golokoqo lingaphindanga laqha-thwa futhi.
Kuningi esingahlawumbisela ukuthi kuyimbangela yalokhu. Ngaphandle kokuba qatha kwabadlali bakudala nokulambela kwabo izimpi, kunokwenzeka ngokuhamba kwesikhathi ukuthi abasingathi balo mdlalo benza izinguquko emithethweni elawula isibhakela.
Kasazi noma lokho kwaba ngenxa yezincomo zodokotela kubasingathi balo mdlalo ukwenzela ukuphepha kwempilo yamabho-kisa.
Kokunye kungaba ngenxa yokuthi ukungenela kwezokukha-ngisa kwazenyusa izindleko zokuhlela izimpi nemali efunwa ngabashayisibhakela.
Leli rekhodi elilandelayo lezimpi zikaJacob, nabanye abashayisibhakela bezikhathi zakhe, likuveza kahle lokhu:
Kwachazeka umsakazi weBBC engqimuza ingqwele
Mhla ka-8 kuMandulo (Septe-mber) ngo-1952 uJacob waba ngu-saziwayo ngosuku olulodwa ngo-kushaya avove inkani uTeddy Gardener ngomzuliswano ka-12 kwewu-15 okwakumele bayilwe.
Ngalokho kunqoba waba yingqwele yeBritish Empire esigabeni sempukane (flyweight) empini yakhe yokuqala eBritain eyayiseNew St James Hall edolo-bheni iNewcastle.
Ngaphambi kwaleyo mpi uGa-rdener wayengumakadebona owayeselwe izimpi eziwu-65, ethwele izicoco ezimbili eseBritish Empire nese-European kuso isisi-ndo sempukane.
Emuva kwaleyo mpi uGardner wawabeka ethala amagilavu. Iphimbo eliqoshiwe lomethuli waleyo mpi esiteshini seBBC, li-khombisa ukuthi wayechazekile yindlela alwa ngayo uJacob ngo-ba uzwakala emteketisa ngokuthi “unguBrown Bomber Omncane” (miniature Brown Bomber) kwazise uJoe Louis wase-United States of America owabe eyingqwele yomhlaba esigabeni sosondonzima ngo-1937-1949 wayebizwa ngoBrown Bomber.
-Zizonke izimpi azilwayo uJacob zimi kanje:
Walwa izimpi eziwu-47, wanqoba eziwu-31 (16 KO) wahlulwa kweziwu-14 (3KO) kwathi kwezimbili kwangabakhona owehlulwayo (2D).
Irekhodi kalilivezi kahle ikhono lakhe
Nokho leli rekhodi kalilivezi kahle ikhono lalo mdlali ngenxa yokuthi wayebuye alwe nabashayisibhakela abangekho esisindweni sakhe semvelo okungese-flyweight.
Kuyinto eyaziwayo ukuthi nxa uguqula isisindo sakho semvelo bese ulwa kwesingaphansi kwakho noma ngaphezulu kwakho, ukuba qatha komshayisibhakela kuyakhinyabezeka – okwenza (umshayisibhakela) ahlulwe kwezinye izimpi ngisho kade enomdlalo omuhle.
Emuva kokubuyela kwakhe kuleli nomndeni wakhe, uJacob wayevamile ukulobela iphephabhuku iZonk! futhi waqhubeka nokuba wumshayisibhakela kwaze kwaba uwabeka ethala amagilavu ngo-1967.
Naphezu kokuba impilo yakhe yayisibuthaka ngenxa yesifo sikashukela, uJacob wanikela ekuthuthukiseni intsha kwezemidlalo waze wadlula emhlabeni ngo-1998 eseneminyaka ewu-69. Ngo- 2003 uhulumeni waleli zwe umhloniphe ngendondo i-Order of Ikhamanga in Silver. Indodakazi yakhe uVeronica nendodana yakhe u-Alan nomhlobo womndeni uTerrence Jacobs basemshikashikeni wokusungula iNtuli Trust ezolondoloza umlando welinye lamaqhawe aseNoordgesig lapho wagcina ehlala khona.
Previous articleUgaqelwe eyaseChina owodumo kwi-BUCS
Next articleUmlawuli uvune uSkhosana ngokhetho lweSascoc